Caalamka, 11 November 2016
Khamiis 11 November 2016
Gabar Soomaali ah oo ka Mid Noqotay Booliisk Edmonton
Gabar asalkeedu yahay Soomaali, haysatana dhalashada dalka Canada ayaa ka mid noqotey Booliska magaalda Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkaaasi.
Ciidamada Kurdishka Ciraq oo Weerar ku Qaaday Bashiqa
Ciidamnada Kurdishka Ciraq ayaa maanta billaabay weerar ay ku qabsanayaan magaalada Bashiqa oo ay haystaan dagaalyahanada Daacish.
Wareysi gaar ah: Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjire Olgan Bekar ayaa marki ugu horreysay la hadlay Laanta AfSoomaaliga ee VOA, isaga oo faahfaahin ka bixiyay xidhiidhka Soomaaliya iyo Turkiga.
Qarax ka dhacay Turkiga
Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay in ka badan 100 kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib marki gaari bam lagu soo rakibay lagu qarxiyey magaalada Diyarbakir ee Koofurbari dalka Turkiga.
QM oo Sheegtay in 239 ay Badda ku Dhinteen
QM ayaa sheegtay in 239 muhaajiriin ah oo la rumaysan yahay inay ka yimaadeen galbeedka Africa ay ku dhinteen xeebaha Libya kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay dageen.
Xaalada bani’aadannimo oo Ka taagan Mosul
Jawiga gudaha iyo hareeraha magaalada Mosul oo aad u xumaa dartii ayey xoogaga duulaanka ku qaaday magaaladaasi sheegeen in ay ku kalliftay in ay ku nagaadeen aagagi ay ku waabariisteen aroornimadii Arbacada.
Maalinta Cambaareynta Dilka Wariyeyaasha
Maalintan ayey Qaramada Midoobay asteysay sanadkii 2013kii, iyadoo lagu xusayay dil loo geystay laba wariye oo Faransiis ah oo lagu dilay dalka Mali 2dii bishii November.
Wararka Ololaha Doorashada Mareykanka
Xill ay ka harsantahay wax ka yar hal todobaad maalinta ay dadka Mareykanka soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, ayey warbixinti ugu danbeysay ee ra’yiga dadweynaha ee doorashada muujineysaa in musharraxiinta Hillary Clinton iyo Donlad Trum ay aad isugu dhawyihiin.
Ciidanka Ciraaq oo Qabsaday Telefashinka Mosul
Ciidamada gaarka ah ee dalka Ciraaq ayaa la wareegay Talaadadii xarunta TV-ga Qaranka ee Magaalada Mosul, xilli ay xoogaga Isbaheysiga la ah Xukumada Baghdad ay xoojinayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.
Turkiga oo Shaqada ka Eryey 10,000 oo Shaqaale ah
Xukuumadda dalka Turkiga ayaa shaqadii ka caydhisay in ka badan 10,000 oo shaqaale rayid ah iyada oo xukuumadda Turkigu waddo tallaabooyin ay wax kaga qabanayso isku-daygii inqilaab ee dalkaasi ka dhacay bishii July.
Miyey Baxsadeen Hogaamiyaasha Daacish?
Waxaa jira dareen sii kordhaya oo ah in marka ciidamada isbaheysigu gacanta ku dhigaan magaalada Mosul ee dalka Ciraq aanan halkaasi loogu tagi doonin hogaamiyaasha sare ee ururuka Daacish, marka laga reebo tiro yar oo dagaalyahana ah hadiiba loogu tago.
Yurub: Caqabadaha Sharciga Ka Heysta Qaxootiga
Qaxooti fara badan iyo dadka kale oo magan galyo doon ah, ayaa sanadihii ugu dambeeyay si weyn ugu qul qulayay dalalka Yurubta qaar.